Mgbidi Ịgba Ọkụ na-ekpuchi n'èzí 75W China Manufacturer
Nkọwa:Ebe a na-enwu ọkụ na ọkụ ọkụ,Mgbapụ ndị na-ahụ maka ebe gas,Enweghi ike ikpuchi ọkụ
Home > Ngwaahịa > Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ > 60w Na-ekpuchi Ìhè > Mgbidi Ịgba Ọkụ na-ekpuchi n&#39;èzí 75W
Ihe Nlereanya.: BB-CSD-75W-H
Ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ anyị nwere 75w na-enye 9000 Lumens na 5000K Light White. Mgbapụ ndị na-ahụ maka ebe gas dika ndi-mọ-ozi nādakwasi gi.
Dịbaa ụgwọ kọmputa gị ruo na 84%, 250W HPS / HID dochie ya na 75W N'èzí Canopy Lighting Fixtures . Ntụle ndụ nke awa 50,000-ugboro atọ ka MH na-edozi, ihe mkpuchi ọkụ a na- ebelata ihe dị oké ọnụ ahịa na mkpa maka mgbanwe. Ihe dị n'okpuru ọkụ ọkụ na-abịa na efere efere nke nwere ike itinye ya na igbe J.
Nke a na- emepụta ọkụ ọkụ dị mma maka ọkụ nchedo, ọkụ ụgbọala na-adọba ụgbọala, ọkụ ọkụ gas, obere ọkụ ụlọ nkwakọba ihe, ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, ọdụ ụgbọ oloko,
60W N'èzí n'ọdụ ụgbọ mmiri na-ekpuchi ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
50W Mpụpụ Mkpọpụ Led Kit IP65 Kpọtụrụ ugbu a
75W Mpụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ maka ebe obibi gas Kpọtụrụ ugbu a
ETL 50W Na-echekwa ụgbọ oloko Kpọtụrụ ugbu a
75W ETL Na-acha ọkụ ọkụ na-ekpuchi Kpọtụrụ ugbu a
Ejiri ọkụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ ọkụ 50W Kpọtụrụ ugbu a
ETL IP65 75W Led Canopy Light Bulbs Kpọtụrụ ugbu a
50W Led Ruo Ngwá Agha Ngwado Kpọtụrụ ugbu a
Ebe a na-enwu ọkụ na ọkụ ọkụ Mgbapụ ndị na-ahụ maka ebe gas Enweghi ike ikpuchi ọkụ Igwe na-acha ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Ndị na-enwu ọkụ maka ọkụ ụlọ N'elu oghere Arena na-enwu ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Anyanwụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Ala na-ekpo ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Home Depot